k7_ho_mp3 [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/2/2467e8881e2c6dfc1f199f57e42b0483.xhtml failed
Ny fanamboarana ny volume
Ny fandraisam-peo amin'ny Audacity
fitaovana famakiana k7 misy sortie casque: walkman ohatra tsara
solosaina misy kara-peo, misy fampidirana line-in. Tsara koa raha manana toerana malaladalaka amin’ny kapila henjana hasiana ireo fichiers temporaires
cable stereo jack male ⇐================⇒ jack male. Tsara raha tsy dia lava loatra ilay cable, ary raha blinde koa mba tsy hahazoana bruit be loatra
Atambatra amin’ilay cable ny sortie casque sy entree line-in amin’ny kara-peo:
rindrankajy handraisam-peo, ohatra Audacity .
Misy toerana roa izany afaka anamboarana ny volume: iray eo amin’ny walkman, ary ny iray amin’ny Controle de volume amin’i windows (raha linux dia hafa, kmix ohatra amin’ny KDE). Jereo ny line-in.
Manao fandraisam-peo fohy mialoha (etsy ambany ny fomba fandraisam-peo) hahafahana manamboatra ny volume-ny tsara: tsy ambany loatra nefa tsy sature. Ohatrohatra an’izao ny endrik’ilay spectre hita amin’izany:
Mila amafisina fa ambany loatra
Ohatra an’izao no METY
Ahena fa Sature loatra
Safidiana ny line-in handraisana ny feo
Tsindriana ilay bokotra Record boribory menamena
Rehefa vita dia tsindriana ny Stop, ilay bokotra misy efamira mivolon-tsokola.
Mizara roa ny fanesorana kotaba:
- Famaritana ny kotaba (bruit de fond): tsongaina ny faritra tsy misy hira, fa kotaba fotsiny, ohatra hoe anelanelana hira roa. Avy eo Menu Effect > Noise Removal .... Misy boite de dialogue mipoitra eo, misy hoe ‘Step1‘, misy bokotra hoe: Get Noise Profile. Tsindriana io bokotra io.
- Fanesorana ny kotaba: tsongaina manontolo amin’izay ilay spectre, ary averina ny Menu Effect > Noise Removal .... Lasa tsy grise intsony ilay ‘Step2‘, ary afaka manala ny kotaba amin’izay amin’ny alalan’ny bokotra Remove Noise.
Rehefa mandray feo dia tsara raha miaraka raisina mitohy ny face iray manontolon’ny k7, mba hitovy daholo ny reglage sy ny fikirakirana natao azy. Avy eo vao tapatapahina isaky ny hira.
Tsongaina ny spectre mifanaraka amin’ny hira voalohany, atao File > Export selection as WAV... na File > Export selection as MP3... na File > Export selection as Ogg Vorbis... arakaraka izay format tiana, ary omena ny anaran’ny fichier hasiana azy.
Marihina fa tsy afaka manao MP3 izy raha tsy miaraka amin’ny LAME mp3 encoder, izay rindrankajy maimaimpoana koa.
Mba ho precis amin’ny fitsongana dia mampiasa zoom. Ireto ny bokotra fanamboarana ny zoom:
Mbola misy zavatra maro azonao atao arakaraka izay tianao, mba ampio eto izay traikefa hitanao avy eo
Rindrankajy Fikirakirana Feo, Feo
k7_ho_mp3.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43